विश्व कला जगतमा हामी जानैपर्छ : कुलपति कर्माचार्य ⋆ ए टु जेड समाचार डट कम - ए टु जेड समाचार डट कम
१९ पुष २०७५, बिहीबार २१:३४
काठमाडौँ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान(नाफा)मा तेस्रो कुलपतिका रुपमा कलाकार कान्छाकुमार कर्माचार्य नियुक्त हुनुभएको छ । विसं २००४ मा जन्मनुभएका कर्माचार्य २०६६ सालमा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव बन्नुभएको थियो । विसं २०२१ देखि चित्रकला साधनामा लाग्नुभएका उहाँसँग कला क्षेत्रका सङ्घसंस्थामा विभिन्न पदमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । उनै केके कर्माचार्यसँग ललितकलाको विकास र चुनौतीका विषयमा आज राससले कुरा गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग राससका प्रधानसम्पादक श्याम रिमाल र उपसमाचारदाता नारायण ढुङ्गानाले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
यो विवाद एकदम जटिल विवाद हो । केही वर्षअघि सरकारले नाफाको जग्गा सङ्गीत एकेडेमीलाई दिने भनी गरेको निर्णयमा हामी साह्रै दुखित छाँैं । आम कलाकार दुखित छन् । हामीले यसलाई गुमाउनु हुँदैन । हामी आर्टिष्ट आफैँ सुकुम्बासी भएर अरुलाई पोस्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि ?
नाफाका पहिलो कुलपति किरण मानन्धरले आफू नियुक्त हुँदा अब कुनै पनि कलाकार भोको रहनु पर्र्दैन भन्नुभएको थियो । त्यो बेला यहाँ सदस्य सचिव हुनुहन्थ्यो । त्यो भनाइको सार्थकता पूरा भयो कि भएन ? नभएको भए नाफाले कलाकारका लागि अब के गर्नेछ त ?
तिनको पुनःनिर्माणमा हामी पनि सहभागी होआँै भन्ने भन्ने कुरा आए जस्तो लाग्दैन, पुराना कलाकारले काम पाए होलान् तर नयाँलाई पारिश्रमिक दिएर आह्वान गरे जस्तो लाग्दैन ?
कलाकारको एउटा सधैंँको गुनासो छ, नाफाले नयाँ काम र कला क्षेत्रको विकासमा मौलिक काम गर्न सकेन भन्ने छ । त्यसो होइन । अब केही गर्छौंँ । कलाकारको आवास अझै बनाउन सकिएको छैन । योजना धेरै छ । सबैको सहयोगको खाँचो छ ।